Ny serivisy ICloud dia voakasiky ny fianjeran'ny Google Cloud | Vaovao IPhone
Ny serivisy ICloud dia voakasiky ny fianjeran'ny Google Cloud ihany koa
Vaovao ara-teknolojia tamin'ny faran'ny herinandro, Google Cloud dia niharan'ny fihenam-bidy lehibe eran-tany nandritra ny alin'ny alahady 2 Jona. Fianjerany lehibe izay ahitantsika ny fahalementsika hampiasa serivisy mifototra amin'ny rahona, serivisy miankina amin'ny mpizara izay tsy hifehezana amin'ny sehatra manokana ary afaka hanome antsika tsy ampoizina toy ny fianjeran'ny motera fikarohana faran'izay tsara, ny avy amin'ny Google, na ny fahaverezan'ny fidirana amin'ny serivisy toa ny Youtube, Analytics, na Gmail, ny mailaka be mpampiasa indrindra.
Fa ny ratsy indrindra dia izany koa nisy fiantraikany tamin'ny gadget mandeha ho azy maro an-trano fehezin'ny Google Cloud ity. Be dia be no tsy afaka niditra tao an-tranony niaraka tamin'ny lakilany natsofoka, na nampirehitra ireo gadget napetany toy ny jiro fanantonana Fahalavoana 5 ora izay nisy fiantraikany tamin'ny serivisy Cupertino ihany koa, manokana ho an'ny serivisy an'ny iCloud… Aorian'ilay fitsambikinana dia holazainay aminao bebe kokoa momba ity fianjerana nomerika manan-danja ity.
Ary eny, na firy na firy Apple te-hivarotra anay fa manangana ivon-tahiry lehibe izy ireo, amin'izao fotoana izaod mampiasa ny serivisy an'ny Amazon Web Services, ary eny, ireo an'ny Google Cloud ihany koa. Serivisy Google cloud izay manohana serivisy toa ny fifandraisan'i Apple, kalandrie, sary, horonan-tsary ary antontan-taratasy. Data izay na dia izy ireo aza Ny encryptions amin'ny ambaratonga iCloud dia mora tohin'ny fahatapahan'ny mpizara izay anohanan'izy ireo.
Vaovao iray, izay na dia voavaha tao anatin'ny dimy ora aza, dia mampiahiahy noho ny fahaverezan'ny fidirana amin'ity data ity. Araky ny fantatrao, ny keynote fampisehoana WWDC 2019 dia tanterahina anio, Ho hitantsika raha maneho hevitra momba ity fianjeran'ny Google Cloud ity i Tim Cook sy ny zanany lahy, satria mety ho fotoana izao hanolorana ireo fifindra-monina serivisy any amin'ireo foibem-pandraharahana zazalahy Cupertino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Ny serivisy ICloud dia voakasiky ny fianjeran'ny Google Cloud ihany koa
Ahoana ny famerenana na famerenana ny iPhone X vaovao amin'ny dingana telo mora
"Ny cholitas manidina", ity no lohatenin'ny horonantsary farany tamin'ny fampielezana Shot on iPhone XS